Pope Francis: Ilekọta ndị gbara ọsọ ndụ na-agbapụ 'nje nke ikpe na-ezighị ezi, ime ihe ike na agha' | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Pope Francis: Ilekọta ndị gbara ọsọ ndụ na 'virus nke ikpe na-ezighị ezi, ime ihe ike na agha'
Pope Francis gbara ndị Katọlik ume ka ha lekọta ndị na-agbapụ "site na nje virus na-ezighi ezi, ime ihe ike na agha," na ozi na afọ 40 nke oflọ Ọrụ Gbara Ọsọ Ndụ nke ndị Jesuit.
N'ime akwụkwọ ozi edepụtara na weebụsaịtị JRS na Nọvemba 12, popu dere na ọrịa oria coronavirus gosipụtara na mmadụ niile "nọ n'otu ụgbọ mmiri".
“N’ezie, a na-amanye ọtụtụ mmadụ n’ụwa taa ịrapara raft na ụgbọ mmiri roba iji gbalịa ịgbaba site na nje nke ikpe na-ezighị ezi, ime ihe ike na agha,” ka popu kwuru n’ozi ọ zigaara onye nduzi mba ụwa JRS. . Ugonna Onyekwere
Pope Francis chetara na e hiwere JRS na Nọvemba 1980 site n'aka Fr. Pedro Arrupe, Jesuit Superior General site na 1965 ruo 1983. A rụgidere Arrupe ime ihe mgbe ọ hụrụ ọnọdụ nke ọtụtụ narị puku ndị gbara ọsọ ndụ South Vietnamese na-agba ụgbọ mmiri mgbe agha Vietnam gasịrị.
Arrupe degaara mpaghara ndị Jesuit karịrị 50 akwụkwọ na-arịọ ha ka ha nyere aka lekọta ọrụ enyemaka mmadụ na mba ụwa maka nsogbu ahụ. E hiwere JRS wee bido ịrụ ọrụ n'etiti ndị ụgbọ mmiri Vietnamese n'ọhịa dị na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia.
"P. Arrupe sụgharịrị ujo ya na nhụjuanya nke ndị na-agbapụ ala nna ha na-achọ nchekwa na-esote agha na Vietnam na nchegbu miri emi maka ọdịmma anụ ahụ ha, nke mmụọ na nke ime mmụọ ", ka popu dere n'akwụkwọ ozi nke 4 Ọktọba.
Popu kwuru na Arrupe nwere "ezigbo Christian na Ignatian chọrọ ilekọta ọdịmma nke ndị niile nwere oke nkụda mmụọ" gara n'ihu na-eduzi ọrụ nke nzukọ taa na mba 56.
Ọ gara n'ihu: "N'agbanyeghi oke ahaghị nha ahụ, JRS nwere ọrụ dị mkpa ọ ga-arụ n'ime ka a mara ọnọdụ ndị gbara ọsọ ndụ na ndị ọzọ a chụpụrụ n'ụlọ ha n'ike."
"Nke gị bụ ọrụ dị mkpa nke ịgbatị aka ọbụbụenyi nye ndị nọ naanị ha, ndị kewapụrụ onwe ha na ezinụlọ ha ma ọ bụ ọbụlagodi ndị a gbahapụrụ agbahapụ, soro ha na-enye ha olu ha, karịa ihe niile site n'inye ha ohere itolite site na mmemme mmuta na mmepe".
"Ihe akaebe gị banyere ịhụnanya Chineke n'ijere ndị gbara ọsọ ndụ na ndị si mba ọzọ dịkwa mkpa maka iwulite 'ọdịbendị nke ịbịakwute' nke naanị ya nwere ike ịnye ntọala maka ịdị n'otu na-adịgide adịgide maka ọdịmma nke ezinụlọ anyị mmadụ".
JRS gbasaa gafere Ebe Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia na 80s, na-agbatị na ndị gbara ọsọ ndụ na ndị gbara ọsọ ndụ na Central na Latin America, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Europe na Africa. Taa, nzukọ a na-akwado ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 680.000 gburugburu ụwa site na ụlọ ọrụ mpaghara 10 na ụlọ ọrụ mba ụwa na Rome.
Popu kwubiri: "N'ile anya n'ọdịniihu, enwere m obi ike na enweghị ndaghachị ma ọ bụ ihe ịma aka, ma ọ bụ nke onwe ma ọ bụ nke ụlọ ọrụ, ga-enwe ike ịdọpụ uche ma ọ bụ kụda mmụọ ị zaghachi n'ụba oku a chọrọ iji kwalite ọdịbendị nke ịbịaru nso na zute site na mkpebi gị siri ike. nke ndị gị na ha na-eso kwa ụbọchị "